Ra’iisul wasaare Kheyre iyo guddoomiye Thaabit oo dhagax dhigay dhismaha jidka soddonka (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre iyo guddoomiye Thaabit oo dhagax dhigay dhismaha jidka soddonka (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha jidka soddonka oo ka mid ah jidadka ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda dhagax dhigista jidka soddonka ayaa sheegay in dhismaha jidkaasi uu qeyb ka yahay dib usoo celinta billicda iyo xasillinta dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Dhismaha jidka sodonka ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay maalgelin doonaan ganacsatadda gobolka Banaadir, iyadoona hore loo filaayay in shirkad Turki ah ay fulliso dhismaha jidkaasi, balse ay mas’uuliyadeeda haatan la wareegeen ganacsatadaas.
Jidka sodonka ayaa ah jid halbowle u ah isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka magaalada Muqdisho, wuxuuna jidkaasi isku xiraa degmooyinka Hodan, H/wadaag iyo Yaaqshiid.
Ugu dambeyntii, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in muddo kooban lagu soo gaba-gabeyn doonno dhisidda jidka soddonka ee magaalada Muqdisho.